Une Mudzimu Usingafi Here? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Une Mudzimu Usingafi Here?
Mudzimu “Unodzokera Kuna Mwari”
Chii Chinoitika Kuvadiwa Vedu Vakafa?
“RUGWARO rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobetsera pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu, pakuranga nokururama,” akanyora kudaro Pauro. (2 Timoti 3:16) Hungu, Bhaibheri ibhuku rechokwadi rinobva kuna Mwari wechokwadi, Jehovha.—Pisarema 83:18.
Sezvo Jehovha ari iye Musiki wezvinhu zvose, kusanganisira vanhu, anonyatsoziva zvinoitika kwatiri patinofa. (VaHebheru 3:4; Zvakazarurwa 4:11) Uye muShoko rake rakafuridzirwa, Bhaibheri, akapa mhinduro dzechokwadi nedzinogutsa kumibvunzo pamusoro pezvinoitika parufu.
MuBhaibheri, mashoko akashandurwa kuti “mudzimu” anonyanyoreva “chifemo.” Asi zvinoreva zvinopfuura chiito chokufema. Somuenzaniso, munyori weBhaibheri Jakobho anoti: “Muviri usina mudzimu wakafa.” (Jakobho 2:26) Saka, mudzimu ndiwo unoita kuti muviri uve mupenyu.
Iri simba rinoraramisa haringangova chifemo, kana kuti mweya, unongopfuura nomumapapu. Nei zvingasadaro? Nokuti kana kufema kwamira, upenyu hunoramba huri mumasero omuviri kwekanguva—“kwemaminitsi anoverengeka,” maererano neThe World Book Encyclopedia. Nechikonzero ichi, kufefemutsa kunogona kubudirira. Asi upenyu hukangopera mumasero omuviri chete, zvipi nezvipi zvingaedzwa pakufefemutsa hazvibudiriri. Chifemo chose, kana kuti mweya wose, uri panyika pano haugoni kuraramisa kunyange sero rimwe kana rafa. Saka, mudzimu isimba roupenyu risingaoneki—rinoita kuti masero arambe ari mapenyu uye munhu wacho ararame. Iri simba roupenyu rinotsigirwa nokufema.—Jobho 34:14, 15.
Uyu mudzimu unongoshanda muvanhu chete here? Bhaibheri rinotibatsira kusvika pakuziva zvakarurama panhau iyi. Mambo akachenjera Soromoni akabvuma kuti vanhu nemhuka “zvose zvine [“mudzimu,” NW] mumwe,” uye akabvunza kuti: “Ndiani angaziva kana [“mudzimu,” NW] womunhu uchikwira kumusoro, kana [“mudzimu,” NW] wemhuka uchiburukira pasi kunyika?” (Muparidzi 3:19-21) Saka mhuka zvose nevanhu zvinotaurwa nezvazvo sezvine mudzimu. Zvingava sei zvakadaro?
Mudzimu, kana kuti simba roupenyu, unogona kufananidzwa nesimba remagetsi rinofamba mumuchina kana kuti mudziyo. Magetsi asingaoneki anogona kuita mabasa akasiyana-siyana, zvichienderana nemhando yechinhu chaari kupa simba. Somuenzaniso, chitofu chemagetsi chinogona kuitwa kuti chipise, kombiyuta inogona kuitwa kuti ironge mashoko, uye terevhizheni ichiitwa kuti ibudise mashoko nemifananidzo. Asi, simba remagetsi harifi rakava chinhu charinoshandisa. Rinongoramba riri simba. Saizvozvowo, simba roupenyu haritori chipi nechipi chezvimiro zvezvisikwa zvarinoraramisa. Harisi munhu uye harina mano okufunga. Vanhu nemhuka “zvine [“mudzimu,” NW] mumwe.” (Muparidzi 3:19) Saka panofa munhu mudzimu wake haurambi uchirarama munyikadzimu sechisikwa chomudzimu.
Saka, chokwadi nezvevakafa ndechipi? Uye chii chinoitika kumudzimu panofa munhu?
Munhu wokutanga Adhamu, paakarega kuteerera murayiro waMwari nemaune, Mwari akati kwaari: “Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu; nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, uchadzokerazve kuguruva.” (Genesi 3:19) Adhamu aivepi Jehovha asati amusika neguruva? Zviri pachena kuti hapana kwaaiva! Akanga asiko. Saka pakanzi naJehovha Mwari Adhamu aizo“dzokera kuvhu,” aireva kuti Adhamu aizofa odzokera pakungova sevhu riri pasi. Adhamu aisazotamira kunyikadzimu. Parufu Adhamu aizova asisikozve. Chirango chake chaiva rufu—kusavapo kwoupenyu—kwete kutamira kune mamwe mararamiro.—VaRoma 6:23.
Zvakadini nevamwe vakafa? Chokwadi nezvevakafa chinojekeswa pana Muparidzi 9:5, 10, patinoverenga kuti: “Vakafa havana chavanoziva, . . . hakuna basa, kana zano, kana zivo, kana uchenjeri [muguva].” Saka kufa, kusavapo. Munyori wepisarema akanyora kuti kana munhu afa, “[“mudzimu,” NW] wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake; nezuva iro mano ake anopera.”—Pisarema 146:4.
Zviri pachena kuti vakafa havapo. Havagoni kuziva chinhu chipi zvacho. Havagoni kukuona, kukunzwa, kana kutaura newe. Havagoni kukubatsira kana kukukuvadza. Hautombofaniri kutya vakafa. Asi sei zvichinzi “mudzimu unobuda” kubva mumunhu paanofa?
Bhaibheri rinotaura kuti kana munhu afa, ‘[“mudzimu,” NW] unodzokera kuna Mwari akaupa.’ (Muparidzi 12:7) Izvi zvinoreva here kuti chimwe chinhu chiri muchimiro chomudzimu chinotonyatsofamba nomuchadenga chichienda kuna Mwari? Kana! Nzira iyo Bhaibheri rinoshandisa nayo shoko rokuti “unodzokera” hairevi kufamba kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Somuenzaniso, vaIsraeri vasina kutendeka vakaudzwa kunzi: “Dzokerai kwandiri, neni ndichadzokera kwamuri—ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo.” (Maraki 3:7) ‘Kudzokera’ kwaIsraeri kuna Jehovha kwaireva kutendeuka kubva kumararamiro akaipa vodzokera kunzira yaJehovha yakarurama. Uye ‘kudzokera’ kwaJehovha kuna Israeri kwaireva kufungazve nezvevanhu vake achivanzwira nyasha. Kwavari vose ‘kudzoka’ kwaisanganisira mafungiro, kwete kubva chaiko pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe.
Saizvozvowo, parufu hapana kufamba chaiko kubva pasi kuenda kudenga kunoitika pano“dzokera” mudzimu kuna Mwari. Kana simba roupenyu rangobuda mumunhu chete, Mwari chete ndiye anogona kuridzorera. Saka mudzimu ‘unodzokera kuna Mwari’ mupfungwa yokuti tariro ipi neipi youpenyu munguva yemberi yomunhu iyeye yava kuna Mwari chete.
Somuenzaniso, chimbofunga zvinotaura magwaro nezvorufu rwaJesu Kristu. Munyori weEvhangeri Ruka anorondedzera kuti: “Jesu akadanidzira nenzwi guru akati: ‘Baba, ndinoisa mudzimu wangu mumaoko enyu.’ Akati ataura izvi, akafa.” (Ruka 23:46) Mudzimu waJesu sezvawaibuda maari, akanga asiri kutoenda kudenga. Jesu haana kumutswa kuvakafa kutozosvikira zuva rechitatu, uye akatozoenda kudenga mazuva 40 apfuura. (Mabasa 1:3, 9) Zvisinei, panguva yokufa kwake, Jesu akaisa nechivimbo mudzimu wake mumaoko aBaba vake, achivimba zvakazara kuti Jehovha anokwanisa kumudzorera kuupenyu.
Hungu, Mwari anogona kudzorera munhu kuupenyu. (Pisarema 104:30) Zvinozarura tariro yakakura zvikuru!
Bhaibheri rinoti: “Awa iri kuuya mairi avo vose vari mumakuva ekurangaridza vachanzwa inzwi ra[Jesu] vobuda.” (Johani 5:28, 29) Hungu Jesu Kristu akavimbisa kuti vose vanoyeukwa naJehovha vachamutswa, kana kuti vachadzorerwa kuupenyu. Pakati pavo pachava nevaya vakararama zvakanaka sevashumiri vaJehovha. Asi mamwe mamiriyoni evanhu vakafa vasina kumboratidza kana vangada mitemo yaMwari yakarurama kana kuti kwete. Zvichida vaisaziva zvinodiwa naJehovha kana kuti vakashaya nguva yakakwana yokuita zvinodiwa. Vanhu vakadaro vanoyeukwawo naMwari uye vachamutswa, nokuti Bhaibheri rinoti: “Kuchava nokumuka kwevakarurama nevasina kururama.”—Mabasa 24:15.
Nhasi, nyika yakazara noruvengo nemakakatanwa, mhirizhonga nokudeurwa kweropa, kusvibiswa uye zvirwere. Dai vakafa vaizodzorerwa kuupenyu munyika yakadaro, zvechokwadi kufadza kupi nokupi kwazvaizoita kwaizova kwenguva duku. Asi Musiki akavimbisa kuti ava kubva ogumisa vanhu vomunyika yanhasi iri kudzorwa naSatani Dhiyabhorosi. (Zvirevo 2:21, 22; Dhanieri 2:44; 1 Johani 5:19) Chichava chokwadi chinoshamisa kuti vanhu vakarurama—“pasi idzva”—vagarisane pamwe chete.—2 Petro 3:13.
Panguva iyoyo “hakuna ugeremo, uchati: Ndinorwara.” (Isaya 33:24) Kunyange nemarwadzo orufu achabviswa, nokuti Mwari “achapukuta misodzi yose pamaziso avo, uye rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipo. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.” (Zvakazarurwa 21:4) Itariro yakadini kune avo vari “mumakuva ekurangaridza”!
Jehovha paachatsvaira uipi hwose panyika pano, haazoparadzi vakarurama pamwe chete nevakaipa. (Pisarema 37:10, 11; 145:20) Chaizvoizvo, “boka guru revanhu . . . vanobva kumarudzi ose nemadzinza nevanhu nendimi” vachapona “kutambudzika kukuru,” uko kuchaparadza nyika iripo yakaipa. (Zvakazarurwa 7:9-14) Nokudaro, boka guru revanhu richange riripo kutambira vakafa.
Une shungu dzokuonazve vadiwa vako vakafa here? Unoda kurarama nokusingaperi muParadhiso here? Saka unofanira kupinza zivo yakarurama yokuda kwaMwari nezvinangwa zvake. (Johani 17:3) Kuda kwaJehovha kuti “vanhu vose vaponeswe uye vasvike pazivo yakarurama yechokwadi.”—1 Timoti 2:3, 4.
“Zvauri guruva, uchadzokerazve kuguruva”
Mudzimu ungafananidzwa nemagetsi
Rumuko ruchaunza mufaro usingagumi